မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Humidifier, Air ကို Humidifier, မြူခိုး Humidifier ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်း
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Humidifier,air ကို Humidifier,အခိုးအငွေ့ Humidifier,မြူခိုး Humidifier Cool,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > air ကို Humidifier
air ကို Humidifier
air ကို Humidifier ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Humidifier, air ကို Humidifier ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အခိုးအငွေ့ Humidifier R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ညအလင်းရောင်ဖြင့် 1500ML Cool Mist Air Humidifier
Cool Mist စိုထိုင်းဆကြီးမားသောစွမ်းရည်အော်တိုပိတ်ထား
Cool Mist Humidifier အဘယ်သူမျှမ Filter ကိုရှင်းလင်းဖို့လွယ်ကူသည်
Aromatherapy Aroma ပျံ့နှံ့လူငယ်များငါ့ကိုအနီးရှိနေထိုင်မှု
အိပ်ခန်းသည် Cool Mist Air Humidifier
1.5L မြူခိုး Air ကို Humidifier ညအလင်း Cool
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြူခိုး Air ကို Humidifier ကလေးများ ROOM တွင် Cool
မွေးကင်းစကလေးငယ်အခန်းများအတွက်မြူခိုး Air ကို Humidifier Cool
မြူခိုး Air ကို Humidifier ကလေးလွယ်ကူသန့်ရှင်း Cool
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၂၄၅ * ၂၃၅ * ၂၉၀ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - ၅၀.၅ * ၄၈.၅ * ၆၀ မီလီမီတာ၊
Air Innovations Purifier ခေတ်သစ် Cool Mist Humidifier ထိပ်တန်းအရည်အသွေးအစိတ်အပိုင်းများ Air ကိုစိုထိုင်းဆ။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သော Cool Mist Humidifier FUNCTIONAL / STYLISH DESIGN - ညအလင်းရောင်အတွက်သီးခြားခလုတ်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းနှင့်စိုထိုင်းဆအဆင့်များအတွက်ထိတွေ့ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်ဤ ultrasonic...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၂၃၀ * ၁၈၅ * ၂၇ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - ၄၇၅ * ၃၈၅ * ၅၆၀ မီလီမီတာ / ၈ စက်ပါ
ညအလင်းရောင်ဖြင့် 1500ML Cool Mist Air Humidifier ultrasonic နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဤအန္တရာယ်ရှိသည့် ultrasonic humidifier သည်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်အဆင်ပြေမှုများကိုပေးစွမ်းရန်အတွက် filter များမလိုအပ်ဘဲတိတ်တဆိတ်နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ Air Humidifiers...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၂၄၅ * ၂၃၅ * ၂၄၅ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - 505 * 485 * 510mm / 8PCS
Cool Mist စိုထိုင်းဆကြီးမားသောစွမ်းရည်အော်တိုပိတ်ထား ULTRASONIC COOL MIST HUMIDIFIER - အခန်းများအတွက် ultrasonic humidifer သည်နာရီပေါင်း ၂၀ (အချိန်ကိုသင်ရွေးချယ်သောအခိုးအငွေ့ပေါ်တွင်မူတည်သည်) သည် ၃၅ dB ထက်နည်းသောအသံဖြင့်အသံကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှူရှိုက်မိစေရန်နှင့်အိပ်စက်အနားယူနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။ LARGE CAPACITY WATER TANK -...
Cool Mist Humidifier အဘယ်သူမျှမ Filter ကိုရှင်းလင်းဖို့လွယ်ကူသည် အိပ်ခန်းအသုံးပြုခြင်းအတွက်တိတ်ဆိတ်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်း - Ultrasonic humidifier သည်အလွန်တရာတိတ်ဆိတ်ပြီးအေးမြသောအငွေ့ပျံစက်သည်ဆူညံသံ ၃၅ dB အောက်လျော့နည်းစေသည်။ အိမ်သုံး humidifier သည်သင်၏ကလေးနှင့်ညအချိန်တွင်အိပ်မပျော်သည့်အိပ်စက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။...
Aromatherapy Aroma ပျံ့နှံ့လူငယ်များငါ့ကိုအနီးရှိနေထိုင်မှု သင်၏အိမ်တစ်အိမ်လုံး၌အချိုမှုန့် humidifier အသုံးပြုခြင်းသည်ကုထုံးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ စိုထိုင်းဆကိုထပ်ထည့်သည် -...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၂၄၅ * ၂၃၅ * ၂၆၀ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - 505 * 485 * 540mm / 8PCS
အိပ်ခန်းသည် Cool Mist Air Humidifier ULTRASONIC COOL MIST TECHNOLOGY AIR HUMIDIFIER - ၁၆ နာရီကြာအဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုအတွက်လေထုကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာစိုစွတ်စေသဖြင့်သင်ရှူရှိုက်မိပြီးအိပ်စက်အနားယူစေနိုင်သည်။ အမြင့်နှင့်အနိမ့်အခိုးအငွေ့ထွက်မှုအခြေအနေများသည်မြူစိုထိုင်းစက်ကိုသင်၏သက်တောင့်သက်သာအနေအထားနှင့်ကိုက်ညီစေရန်လွယ်ကူစေသည်။...
1.5L မြူခိုး Air ကို Humidifier ညအလင်း Cool UNIQUE Silent နည်းပညာ ULTRASONIC HUMIDIFIER: ရိုးရာလေကြောင်း humidifiers မတူဘဲနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ Ultra-အသံတိတ်အခိုးအငွေ့ humidifier ရေစီးဆင်းမှုနည်းပညာအားနည်းခြင်းနှင့် dustproof ရေမြှုပ်အလုပ်လုပ်, သင့်လေ့လာမှုနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲတိတ်ဆိတ် humidification များအတွက် 35dB...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 235 245 * 245mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 485 505 * 510mm / 8PCS
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြူခိုး Air ကို Humidifier ကလေးများ ROOM တွင် Cool 2500ML Tank: 2500ML အကြံပေးအဖွဲ့လေကြောင်း humidifier လွယ်ကူသောအဆာများအတွက်အများဆုံးရေချိုးခန်းနစ်မြုပ်အောက်မှာကိုက်ညီနှင့် ultrasonic humidifier ပြေးနာရီ 20 အထိတိတ်ဆိတ်လေသံတိုးတိုး။ ကယ်ဆယ်ရေး SOOTHING: မြူခိုး Humidifier...
မွေးကင်းစကလေးငယ်အခန်းများအတွက်မြူခိုး Air ကို Humidifier Cool အိပ်ခန်း FOR ကုန်းတိုက်-တိတ်ဆိတ် AIR HUMIDIFIERS: Ultrasonic humidifier ကွာသူတွေကိုအကုန်လုံးဆူညံသံကနေ, အလုပ်လုပ်ကိုင်သို့မဟုတ်အိပ်ပျော်နေသော, သင့်လေ့လာမှုနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲတိတ်ဆိတ် humidification များအတွက် 35dB (ကကွန်ပျူတာထက်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်)...
မြူခိုး Air ကို Humidifier ကလေးလွယ်ကူသန့်ရှင်း Cool အေးမြတဲ့အခိုးအငွေ့ HUMIDIFIER: ဤတိတ်ဆိတ်လေကြောင်း humidifier နှင့်အတူလေထုခြောက်မှအေးမြစိုဓာတ်ကိုထည့်ပါ။ အဆိုပါ 1900ml အကြံပေးအဖွဲ့အိပ်ခန်း & သင့်အိမ်အတွင်းရှိအလတ်စားအခန်းပေါင်းအဘို့ဤအခိုးအငွေ့ humidifier ကြီးမြတ်အောင်, အနိမ့်ပေါ် 10 နာရီမှတက်ပြေး။...
တရုတ်နိုင်ငံ air ကို Humidifier ပေးသွင်း
တစ်ဦးလေကြောင်း humidifier ကဘာလဲ?
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ humidifier ကုထုံးဟာခန္ဓာကိုယ်များစွာသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ယားယံစေနိုင်သည်ကိုခြောက်သွေ့ကာကွယ်တားဆီးဖို့လေမှအစိုဓာတ်ကိုဖြည့်စွက်။ အေးမြသောအခိုးအငွေ့ humidifiers အရေပြား, နှာခေါင်း, လည်ချောင်းနှင့်နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့ကုသမှုအတွက်အထူးသဖြင့်ထိရောက်သောနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစတုပ်ကွေးသို့မဟုတ်အအေးမိခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်ရောဂါလက္ခဏာအချို့ကိုဖြေလျှော့နိုင်ပါတယ်။
ငါအဘို့အခိုးအငွေ့ humidifier အဘယ်အရာကိုအသုံးပွုနိုငျသနညျး
စိုထိုင်းဆခြောက်သွေ့သက်သာရာနိုငျသောသဘာဝအစိုဓာတ်အေးဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, အိမ် humidifiers မကြာခဏသက်သာရာအတွက်အသုံးပြုနေကြသည်:
အကှေ့ပိတ်ဆို့မှုကို / ခေါင်းကိုက်ခြင်း
မြူခိုး Humidifier Cool
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Car humidifier